अरूलाई झुक्याएर पैसा कमाउने भएको भए कारमा हिँड्थे होला : भाग्य न्यौपाने…हेर्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
काठमाडौं, २४ साउन : युट्युबर भाग्य न्यौपाने पछिल्लो समय निकै चर्चामा छन् ।उनले एक बालगृह सञ्चालन गरिरहेकी महिलालाई दिएको १० हजार फिर्ता लिनुका साथै बिना मास्क उनको छेउमा बसेर अन्तवार्तालिएपछि भाग्य निकै चर्चामा रहेका हुन् ।
उनीमाथि विभिन्न प्रकारको द,बाब आएको छ । भाग्यले आफूबाट ग,ल्ती भएको र क्ष,मा मागे पनि कतिपय व्यक्ति अहिले पनि उनको वि,रुद्धमा लागेका छन् ।
कतिपयले त भाग्यको सम्प्त्तिसमेत छा,नविबन हुनुपर्ने मागसमेत गरेका छन् । यसैबीच, सो विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेपछि उनी बोलेका छन् ।
भाग्यले सम्पतीको नाममा बुबाले बनाउनु भएको घर र एउटा मोटरसाइकल रहेको बताएका छन् । साथै उनले यदि अरूलाई झुक्याएर पैसा कमाउने भएको भए कारमा हिँ,ड्ने है,सियत हुन्थ्यो भन्दै ट्विट गरेका छन् ।
उनले गरेका ट्विट !
‘सम्पतीको नाममा बुबा ले बनाउनु भएको घर र एउटा मोटरसाइकल छ,’ उनले लेखेका छन्, ‘यदि अरूलाई झुक्याएर पैसा कमाउने भएको भए म पनि कारमा हिँड्थे होला नि होइन? समाजसेवा नै मेरो धर्म हो । र, दुःखमा परेकालाई सहयोग गर्नु नै मेरो उद्देश, जय नेपाल
Previous नेता हरु पटक पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने तर ३ करोड जनताको प्रिय बनेका कुलमान घिसिङ्गको दोश्रो कार्यकाल किन न हुने ? – काशी जेट्ली
Next प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ : राम जन्मभूमि अयोध्याबारे बलियो प्रमाण भेटिएको छ, काम अघि बढाऔं